Acute Myeloid Leukemia (ရိုးတွင်းခြင်ဆီမှ စတင်ဖြစ်သောသွေးကင်ဆာ) - Hello Sayarwon
Acute Myeloid Leukemia (ရိုးတွင်းခြင်ဆီမှ စတင်ဖြစ်သောသွေးကင်ဆာ)
Acute Myeloid Leukemia (ရိုးတွင်းခြင်ဆီမှ စတင်ဖြစ်သောသွေးကင်ဆာ) ကဘာလဲ။
Acute Myeloid leukemia (AML) ဆိုသည်မှာ အချို့ အရိုးများ၏ အတွင်းပိုင်းသည် ပုံမှန်မဟုတ်သော myeloblasts (သွေးဖြူဥ အမျိုးအစား တစ်မျိုး)၊ သွေးနီဥဆဲလ်များ၊ သွေးဥ မွှာများကို ဖြစ်စေသော ကင်ဆာ အမျိုးအစား တစ်ခု ဖြစ် သည်။
သို့သော်လည်း အများစုတွင် ရောဂါသည် သွေးထဲတွင် လျင်မြန်စွာ ပျံ့နှံ့သည်။ တစ်ခါတစ်ရံ ပြန်ရည်ကြောအဖုများ၊ အသည်း၊ သရက်ရွက် နှင့် အဓိက အာရုံကြောစနစ် (ဦးနှောက် နှင့် ကျောရိုးနာဗ်ကြိုး) စသော ခန္ဓါကိုယ်အနှံ့သို့ ပျံ့နှံ့သည်။
အန္တရာယ် ဖြစ်စေသော အချက်များကို လျော့ချခြင်းဖြင့် ၎င်းကို ထိန်းချုပ်နိုင်ပါသည်။ ပိုမိုသော အချက်အလက် များအတွက် ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင် ပါ။
Acute Myeloid Leukemia (ရိုးတွင်းခြင်ဆီမှ စတင်ဖြစ်သောသွေးကင်ဆာ) ရဲ့လက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲ
ရိုးတွင်းခြင်ဆီမှစတင်ဖြစ်ပွားသော သွေးကင်ဆာ ဆဲလ် များ၏ သက်ရောက်မှုကြောင့် ပုံမှန် သွေးဆဲလ်များ လုံလောက်စွာ မထုတ်လုပ်နိုင်တော့ပါ။
Acute myeloid leukemia ၏ အဖြစ်များသော ရောဂါ လက္ခဏာများမှာ
လူနာသည် အလွန်ဖျော့တော့နေပြီး ပင်ပန်းနွမ်းနယ် နေမည်။ အသက်ရှူ မြန်နေနိုင်သည်။ ၎င်းသည် သွေး နီဥဆဲလ်များ ချို့တဲ့ခြင်းကြောင့် ဖြစ်သည်။
လူနာသည် သွေးဖြူဥဆဲလ်များ ချို့တဲ့ခြင်းကြောင့် ရောဂါပိုးကူးစက်မှုများ တစ်ခုပြီးတစ်ခု ဖြစ်နေမည်။
သွေးဥမွှာများ အလွန်နည်းသောကြောင့် ပုံမှန်မဟုတ် ဘဲ သွေးထွက်ခြင်း၊ အညိုမဲစွဲလွယ်ခြင်း၊ အမျိုးသမီး များ ရာသီလာစဉ် သွေးများစွာထွက်ခြင်း၊ သွားဖုံးမှ သွေးထွက်ခြင်း၊ ဆက်တိုက် နှာခေါင်းသွေးထွက်ခြင်း တို့ ဖြစ်နိုင်သည်။
လူနာ၏ အရေပြားတွင် အဖုအပိမ့်များထွက်ခြင်း၊ သွေး အစက်များ ဖြစ်နိုင်သည်။
ယေဘုယျအားဖြင့် လူနာသည် မကျန်းမာသလို ခံစား ရသည်။ လည်ချောင်းနာခြင်း၊ ပါးစပ်နာခြင်း ဖြစ်နိုင် သည်။
အဖျားတက်ခြင်း၊ ညဘက်ချွေးအလွန်ထွက်ခြင်း ဖြစ် နိုင်သည်။
အချို့အဖြစ်နည်းသော ရောဂါလက္ခဏာများလည်း ဖြစ်နိုင် သည်။ အရိုးအဆစ်များ နာကျင်ခြင်း ဖြစ်နိုင်သည်။ ထို့အပြင် ဖျော့တော့သော အရေပြားတွင် ခရမ်းပြာရောင် ဖောင်းကြွ သော အကွက်များလည်း ဖြစ်နိုင်သည်။
အထက်တွင် ဖော်ပြ မထားသော အခြားလက္ခဏာ များလည်းရှိနိုင်ပါသည်။ အကယ်၍ သင့်ဆီတွင် ရောဂါ လက္ခဏာ တစ်ခုခု ရှိနေသည်ဟု စိုးရိမ်ပါက ဆရာဝန်နဲ့ ဆွေးနွေး တိုင်ပင်သင့်သည်။
Acute Myeloid Leukemia (ရိုးတွင်းခြင်ဆီမှ စတင်ဖြစ်သောသွေးကင်ဆာ) ကိုဘာတွေကဖြစ်စေသလဲ
လေ့လာမှုအချို့အရ DNA ပြောင်းလဲခြင်းကြောင့် ပုံမှန် ရိုးတွင်းခြင်ဆီ ဆဲလ်များသည် သွေးကင်ဆာဆဲလ်များ ဖြစ်လာ သည်။ ပုံမှန်ဆဲလ်များသည် ဆဲလ်၏ ခရိုမိုဆုန်းတွင်ပါသော အချက်အလက်များကို အခြေခံပြီး ကြီးထွားသည်၊ လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်သည်။ ခရိုမိုဆုန်းများသည် ဆဲလ်တစ်ခုစီတွင် ပါဝင်သော DNA ကြိုးမျှင်ရှည်များ ဖြစ်သည်။
Acute myeloid leukemia သွေးကင်ဆာ ဖြစ်စဉ်များ တွင် မတူညီသော ခရိုမိုဆုန်းပြောင်းလဲမှု များစွာ ရှိသည်။ အချို့ပြောင်းလဲမှု များသည် ပို၍ အဖြစ်များသည်။ ထို့အပြင် acute myeloid leukemia နှင့် ဆက်စပ်သော DNA ပြောင်းလဲမှုများသည် လူ တစ်ဦး၏ ဘဝသက်တမ်းအတွင်း ဖြစ်ပွားသည်။
ငါ့ဆီမှာ Acute Myeloid Leukemia (ရိုးတွင်းခြင်ဆီမှ စတင်ဖြစ်သောသွေးကင်ဆာ) ဖြစ်နိုင်ခြေကိုဘာ်တွေက မြင့်တက်စေသလဲ
Acute myeloid leukemia ဖြစ်နိုင်ချေကို မြင့်စေသော အချက်အချို့မှာ
အချို့ ဓါတုပစ္စည်း ထိတွေ့မှုများ
မသေချာသော၊ သက်သေပြထားခြင်း မရှိသော သို့မဟုတ် မငြင်းပွားဖွယ်ရှိသော အချက်များ
Acute Myeloid Leukemia (ရိုးတွင်းခြင်ဆီမှ စတင်ဖြစ်သောသွေးကင်ဆာ) ကို ဘယ်လိုအတည်ပြုပါသလဲ
ရောဂါလက္ခဏာ မရှိသော လူများတွင် အချို့ကင်ဆာ ရောဂါများကို စောစီးစွာ အဖြေရှာသိနိုင်ရန် ကာကွယ် စစ်ဆေးမှု များ ပြုလုပ်သင့်သည်။ သို့သော်လည်း acute myeloid leukemia ကို စောစီးစွာ အဖြေရှာသိနိုင်သော သီးခြား စစ်ဆေးမှု မရှိပါ။ ထို့ကြောင့် ဆရာဝန်သည် သွေးကင်ဆာ ၏ ဖြစ်နိုင်သော ရောဂါလက္ခဏာများရှိပါက ချက်ချင်း အကြောင်းကြားရန် အကြံပြုသည်။
Acute Myeloid Leukemia (ရိုးတွင်းခြင်ဆီမှ စတင်ဖြစ်သောသွေးကင်ဆာ) ကို ဘယ်လိုကုသပါသလဲ
Acute myeloid leukemia အမျိုးအစားခွဲ များစွာသည် သီးခြားသတ်မှတ်ထားသော ကုသမှုများ လိုအပ်သည်။ acute myeloid leukemia အတွက် ပထမဆုံး အရေးကြီးသော ကုသမှုမှာ ဓါတုကုထုံးဖြစ်သည်။ တစ်ခါတစ်ရံ ပင်စည်ဆဲလ် အစားထိုးခြင်းကို ဆက်လက်ပြုလုပ်သည်။ acute promyelocytic leukemia ကိုကုသရန် အခြားဆေးများလည်း အသုံးပြုနိုင်သည်။ အထူးဖြစ်ပွားမှုများတွင် ခွဲစိတ်မှုနှင့် ဓါတ် ရောင်ခြည် ကုထုံးသည် အဓိကနည်းလမ်းများ ဖြစ်သည်။
Acute myeloid leukemia သည် လျင်မြန်စွာ ကြီးထွား နိုင်သောကြောင့် သင်တတ်နိုင်သလောက် မြန်မြန် ကုသမှုကို စတင်သင့်သည်။
ပထမဦးစွာ clinical trial ယူမလား စဉ်းစားနိုင်သည်။ Clinical trial များသည် အလွန်ခေတ်မီသော ကင်ဆာကုသမှု ဖြစ်သည်။ အချို့အခြေအနေများတွင် ၎င်းတို့သည် ကုသမှု အသစ်များ ပြုလုပ်ရာတွင် တစ်ခုတည်းသော နည်းလမ်း ဖြစ်နိုင်သည်။ Clinical trials ကို စဉ်းစားပါက သင်သွားသော ဆေးခန်း သို့မဟုတ် ဆေးရုံတွင် Clinical trial များလုပ်သ လားကို ဆရာဝန်အား စတင်မေးမြန်းပါ။
ဒုတိယအားဖြင့် ဖြည့်စွက်ကုထုံးနည်းလမ်း နှင့် အခြား ရွေးချယ်စရာ ကုထုံးနည်းလမ်းများသုံးနိုင်သည်။ ဖြည့်စွက် ကုထုံး နည်းလမ်း များကို သင်၏ ပုံမှန်ဆေးကုသမှုနှင့် အတူ အသုံးပြုနိုင်သည်။ သို့မဟုတ် အခြားရွေးချယ်စရာ ကုထုံး နည်းလမ်းများကို ဆရာဝန်ပေးသော ဆေးကုသမှုအစား အသုံးပြုနိုင်သည်။ ထိုနည်းလမ်းများသည် ရောဂါလက္ခဏာ များကို သက်သာစေပါသည်။ သို့သော် အချို့နည်းလမ်းများ သည် အလုပ်လုပ်သလား သက်သေပြထားခြင်း မရှိပါ။ သင် အသုံးပြုမည်ဟု စဉ်းစားထားသော ကုထုံးနည်းလမ်း အကြောင်း ဆရာဝန်အား ပြောပြရန် လိုအပ်သည်။
အောက်ပါ လူနေမှုပုံစံများ နှင့် အိမ်သုံး ကုထုံးများ သည် Acute Myeloid leukemia ကို ထိန်းချုပ်နိုင် ပါသည်။
ကျန်းမာရေးနှင့် ညီညွတ်စွာ စားသုံးပါ။
အကယ်၍ သင့်တွင် မေးခွန်းများ ရှိပါက သင့်အတွက် သင့်တော်သော အဖြေရှာဖွေနိုင်ရန် ဆရာဝန်နှင့် ဆွေးနွေး တိုင်ပင် သင့်ပါသည်။
Understanding Acute Myeloid Leukemia. http://www.macmillan.org.uk/information-and-support/leukaemia/leukaemia-acute-myeloid/understanding-cancer. Accessed September 4, 2016
Acute Myeloid Leukemia. http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/acute-myelogenous-leukemia/basics/definition/con-20043431. Accessed September 4, 2016
Leukemia-Acute Myeloid. http://www.cancer.org/cancer/leukemia-acutemyeloidaml/detailedguide/leukemia-acute-myeloid-myelogenous-what-is-aml. Accessed September 4, 2016
Leukemia & Lymphoma. http://www.webmd.com/cancer/lymphoma/acute-myeloid-leukemia-symptoms-treatments. Accessed September 4, 2016
Acute Myeloid Leukemia. http://www.cancer.org/cancer/leukemia-acutemyeloidaml/. Accessed September 4, 2016
Acute Myeloid Leukemia. http://www.cancerresearchuk.org/about-cancer/type/aml/. Accessed September 4, 2016.